अब वडा सदस्यले समेत तलब पाउने | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / अब वडा सदस्यले समेत तलब पाउने
अब वडा सदस्यले समेत तलब पाउने
Posted by: युगबोध in संक्षिप्त समाचार August 6, 2018	0 116 Views
बुटवल  (युस)– प्रदे श नं. ५ को आइतवार बसे को प्रदे शसभाको बै ठकले विभिन्न तीनवटा विधे यक सर्वसम्मतिले पारि त गरेको छ ।
प्रदे शका मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा से वा र अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस् था गर्न बने को प्रतिवे दनसहितको विधे यक, प्रदे श नं. ५ अन्तर्गत स् थानीय तहका पदाधिकार ी तथा सदस् यको सुविधासम्बन्धी ऐ न २०७५ संशो धन गर्न बने को विधे यक र प्रदे श नं. ५ अन्तर्गतका गाउ“सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐ न २०७५ संशो धन गर्न बने को विधे यक सर्वसम्मतिले पारि त भएको हो  ।
स् थानीय तहसम्बन्धी विधे यकमा स् थानीय तहका पदाधिकार ी, सदस् य तथा गाउ“ र नगर सभाका सदस् यले समे त बै ठक भत्ता पाउने उल्ले ख छ । यसअघि स् थानीय तहका पदाधिर कार ीलाई भत्ता र मासिक सुविधा उपलब्ध हुदै आएको मा अब गाउ“ र नगर सभाका सदस् यले समे त भत्ता पाउने गर ी विधे यक पारि त भएको छ । तीनवटै विधे यक प्रदे श प्रमुख उमाकान्त झाबाट प्रमाणिकर ण भएर प्रदे श र ाजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने संवै धानिक व्यवस् था छ । उनीहरुले मासिक तलबका साथै बै ठक भत्ता पनि छुट्टै पाउने छन् ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बै ठकमा निर्णयार्थ प्रस् तुत गर्नु भएको मा सर्वसम्मतिले पारि त भएको हो  । यसअघि तीनवटै विधे यक प्रदे श नं. ५ का आन्तरि क मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद के सीले पारि त गरि यो स् भन्ने प्रस् ताव प्रदे शसभामा पे श गर्नुभएको थियो  ।
विधे यकका विषयमा प्रदे शसभाका सदस् य र मा अर्याल, चे तनार ायण आचार्य, मलर ाज श्रे ष्ठ, र कुलप्रसाद पो ख्रे ललगायतले आ–आफ्ना धार णा व्यक्त गर्नुभएको थियो  । प्रदे शसभाका सदस् यले र ाखे को प्रश्नको जवाफ दिदै आन्तरि क मामिला तथा कानूनमन्त्री के सीले स् थानीय तहमा र हे को कानून निर्माणको अपूर्णतालाई पूर्णता दिएको बताउनु भएको थियो  ।
Previous: विकासमा गति लिँदै गंगादेव गाउँपालिका
Next: बिचौलियाबाट इँटा किन्नेहरु ठगिएको संघको दाबी
जेसीजद्वारा अपाङ्ग समाजलाई २२ हजार सहयोग
रोजगारका लागि घोराहीमा ११ हजारको आवेदन
दाङमा दुई रंगशाला बनाइने